Wariye Caan ah oo Killidiisa u beecinaya dhibaato dhaqaale
By Wariyaha Arrimaha Caafimaadka , Garowe Online
Wariye Swaleh Mdoe ayaa raadinaya inuu helo Sh2.5 million si ii isaga bixiyo deenta lagu leeyahay
NAIROBI, Kenya - Wariye caan ah oo u dhashay dalka Kenya, oo lagu magacaabo Swaleh Mdoe ayaa ku dhawaaqay inuu iibinayo mid kamid ah Kiliyihiisa, kadib markii dhibaato dhaqaale ay soo wajahday.
Swaleh, oo wararka Afka Sawaaxiliga ka akhriya Citizen TV oo fadhigiisa yahay Nairobi ayaa shaaciyay in Kilidiisa uu ku iibinayo lacag gaaraysa Sh2.5 million [Labo Milyan iyo Shan Boqol oo Kun[ oo Shilin, lacagta Kenya oo u dhiganta 19-kun oo Dollar.
Wariyahan oo ah Aabe dhalay dhowr caruur ah ayaa sheegay in go'aanka uu qaatey kadib markii uu la-tashiyo la sameeyay dhaqtarkiisa gaarka ah, oo u xaqiijiyay in wax dhibaato ah kala kulmi doonin hadii hal Kili laga bixiyo.
Mdoe ayaa u sheegay Warbaahinta in caafimaadkiisa uu wanaagsan yahay, islamarkaana dhiigiisa uu yahay nooca [O+ blood] isagoo intaasi ku daray in cidii danaynaysa in Kilidiisa ka iibsato ay lasoo xiriiri karto.
"Waxaa isoo wajahay dhibaato dhaqaale, waxaana si deg deg ah ugu baahanay lacag aan isaga bixiyo deymaha la igu leeyahay, sidaasi darteed waxaan go'aansaday inaan iibiyo mid kamid ah Kiliyaashayda," ayuu yiri Mdoe.
Sheekada Mdoe ee ku aadan beecinta Kilidiisa ayaa ka yaabisay shacabka Kenya, iyadoo si aad ah loogu wadaagay baraha bulshada, oo dadka qaar ay ugu baaqayeen inuu ka tanaasulo iibinta xubinta Jirkiisa, islamarkaana qaab kale isku xaliyo.
Kaalinta Kilida shaqada jirka bini'aadanka ayaa ah inay dhiiga ka saarta wasaqda ku jirta iyo isku dheela-tirka Cadaadiska dhiigga, waxaana dadka cillada ama xanuunka kasoo wajaha lagu sameeyay "dialysis" saacado badan Todobaadkiiba mar.
Degaano ka tirsan dalka kenya oo doorashdooda dib loo dhigey.
Afrika 26.10.2017. 21:02
Waxaa ugu muhiimsanaa falalkii maanta indhaha dadka soo jiitey, markii Iskuul ku yaal magaalada Kisumu ....
Oday 93 jir ah oo sheegay in William Ruto uu ka qaatey Dharkiisa
Caalamka 25.05.2018. 15:15